Soo ogow shanta xero ee ugu fiican Catalonia | Wararka Safarka
5-ta deegaan ee ugu fiican Catalonia
Susana Garcia | | Guryaha, Espana, General
In kasta oo hadda aan safar ku bixi karin, haddana hubaal dhowaan waan awoodi doonnaa, sidaa darteed waa fikrad wanaagsan in la aado raadinta fikrado kala duwan si loo arko adduunka. Xaaladdan oo kale waan arki doonaa kuwaas oo ah kuwa ugu fiican xeryaha ku yaal Catalonia, xulasho fudud oo kaa caawin kara inaad hoy ka hesho qiimo wanaagsan oo bulshadaan ah.
Maanta waxaa jira goobo deegaan oo na siiya dhammaan noocyada raaxadaSidaa darteed, maahan hoyga u muuqda oo kaliya qiimaheeda wanaagsan, laakiin waa xulasho wanaagsan markaad raadineyso hoy. Waxaan arki doonnaa kuwa ugu xerooyinka fiican Catalonia haddii ay tahay meesha aad u socoto.
1 Kaamamka Rhodes
2 Kaamka Bungalows Nou
3 Kaamamka Nautic Almata Glamping
4 Kaamamka Prado Verde
5 La Siesta Salou Resort & Kaamam
Kaamamkan quruxda badan wuxuu ku yaal Punta Falconera, oo ku taal magaalada Roses, oo kaliya hal kiilomitir u jirta xeebta Santa Margarida. Waxay qiyaastii toddobaatan kiilomitir u jirtaa garoonka diyaaradaha Girona. Gudaha Bannaanka xerada ka dib waxaa ku yaal aag barxad lagu ciyaaro iyo waliba laba barkadood oo waawayn oo leh meel loogu talagay qoraxdu. Waa meel ku habboon qoysaska waxayna leedahay makhaayad, sidaa darteed uma baahnin inaan u baxno raadinta adeegyo kale. Waa suurtagal in lagu nagaado bungalows dhameystiran oo leh qurxin casri ah oo ay wax walba ku yaalliin, laga bilaabo aagga nasashada illaa jikada oo buuxda, dhowr qol jiif iyo musqulo. Waxay sidoo kale u dhowdahay agagaarka xeebta si aad ugu raaxeysan karto meeshan haddii ay dhacdo inaadan rabin inaad maalinta ku dhex qaadato barkadda. Kuwa doorbidaya sidoo kale waxaa u bannaan meel teendhooyin ah oo ku yaal xerada. Guryaha qaybtooda waxay leeyihiin awood ilaa lix qof ah.
Kaamka Bungalows Nou
Waxaan ka dhaqaaqeynaa aag xeebeed ilaa aag buuro, tan iyo tan kaamku wuxuu ku yaal La Guingueta, oo ka tirsan Lleida Pyrenees qiyaastii 30 kiilomitir u jirta Sort. Kaamani wuxuu leeyahay bungalow si fiican u qalabeysan illaa lix qof. Kuleylinta deegaanka ayaa la siiyaa, wax loo baahan yahay inta lagu jiro xilliga qaboobaha, oo sidoo kale badanaa xilli sare ku leh aaggan. Qolladaha waxaa laga sameeyay alwaax rustic ah oo leh qaab buur fiican, taas oo ka dhigaysa iyaga kuwo aad u raaxo badan. Intaas waxaa sii dheer, xerada waxaa ku yaal barkad dabaal oo kulul, maqaaxi iyo makhaayad. Agagaarka waxaad ku sameyn kartaa nashaadaadyo kala duwan sida jidadka baaskiil wadista, socodka ama barafka xilliyada.
Kaamamka Nautic Almata Glamping
Kaamamkan quruxda badan iyo kan casriga ahi wuxuu ku yaal Castelló d'Empúries oo ku teedsan wabiga oo dhawr mitir u jira xeebta Sant Pere Pescador. Deegaanku waa teendhooyin u eg nuurad, aad u waasac ah waxayna sidoo kale leeyihiin dhul ballaaran oo leh aragtiyo webiga. Meeshan waxaan ku noolaan karnaa waayo-aragnimo deegaan oo ku habboon laakiin leh adeegyo wanaagsan iyo jawi wanaagsan. Gudaha hoyga waxaa sidoo kale jira aag yar oo jikada ah oo lagu diyaariyo cuntada. Fikradda xanuujinta ayaa ah in aamin loo ahaado qaabka xerada, teendhooyin iyo qaab nololeed ka fudud, laakiin leh waxyaabo aad u wanaagsan oo ka dhigaya joogitaanka mid aad ugu fudud qoysaska iyo kooxaha asxaabta ah.
Kaamamka Prado Verde
Kaamani wuxuu ku yaal Vilamòs, oo ah aag buur ah oo uu ku yaallo baraf xilliga qaboobaha. Waxaan helnay xero kale oo ay ku jiraan qollo buur waaweyn oo lala dego qoyska. Bungalows waxay leeyihiin illaa saddex qol jiif oo leh awood ugu badnaan sideed qof. Waxay leeyihiin kuleyliyaha dhexe, qolka fadhiga oo fadhigiisu yahay fadhiga, iyo jiko buuxda. Ma jiraan wax yar oo adeegyo ah oo ku yaal xeradan quruxda badan leh oo leh muuqaal buuro leh. Kaamku wuxuu kaloo bixiyaa makhaayad iyo makhaayad halkaas oo aad ku heli karto suxuun macaan iyo xitaa rooti cusub. Bannaanka waxaa ku yaal garoon ballaadhan iyo weliba dhul ballaadhan oo hilibka lagu dubto oo aad reerka oo dhan cunto ugu samayn karto dibadda. Hareeraha waxaad ku samayn kartaa hawlo kala duwan oo bannaanka ah sida socodka ama baaskiil wadista.
La Siesta Salou Resort & Kaamam
Dhismahan waa goob dalxiis oo weyn oo loogu talagalay qoyska oo dhan oo ka mid ah xeryaha ugu fiican Catalonia. Waxay leedahay goobo kala geddisan oo leh awood kala duwan, in kasta oo ay suurtagal tahay in qolal lagu nagaado. The Bungalows waa kuwo si wanaagsan loo magacaabay, oo leh meel fadhiga leh fadhiga, jikada, musqusha iyo aag terrace ah, dhammaantoodna waxaa lagu qurxiyey qaab casri ah oo fudud. Dalxiiskani wuxuu kaloo bixiyaa madadaalo faro badan oo loogu talagalay qoyska oo dhan, maadaama ay leedahay afar barkadood oo lagu dabaasho, mid ka mid ah oo leh meel nasasho leh oo qurux badan leh diyaarado biyo ah iyo biyo dhaamis Mid kale waxaa jira bogag loogu talagalay raaxeysiga kan ugu yar qoyska. Dhismuhu wuxuu kaloo leeyahay adeegyo kale oo leh maqaayad u eg habka cuntada oo leh cunno caalami ah, aag supermarket iyo maqaaxi. Waxay ku taal Salou, oo u dhow xeebta waxayna leedahay dhammaan adeegyadan fasax weyn oo lala qaato qoyska oo dhan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » General » 5-ta deegaan ee ugu fiican Catalonia
Magaalooyin laga tagay
Xeebta Oyambre ee Cantabria